“DAAWO”Safiirka Turkiga ee Soomaaliya oo qalab guddoonsiiyay maamulka Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed – Radio Muqdisho
Safiirka Dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Danjire Olgan Bekar oo ay wehliyaan Mas’uuliyiinta Hay’adda Tika ee Dowladda Turkiga u qaabilsan arrimaha fulinta Mashaariicda dowladaasi bixiso ayaa maanta waxa ay xaruanta dhexe ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed kula kulmeen Maamulka sare ee Jaamacadda oo uu ugu horeeyo Guddoomiyaha Jaamacadda Dr Maxamed Axmed Jimcaale iyo Labadiisa ku xigeen.
Maamulka Jaamacadda Ummadda iyo Danjiraha Turkiga ee Soomaaliya waxa ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan dib u soo nooleynta xarumaha bur bursan ee Jaamacadda ay Dalka ku lahayd, iyadoo Maamulkuna uu faah faahin ka siiyay Danjiraha Aas Aaskii Jaamacadda, heerarkii ay soo martay iyo dib u howl gelinta Jaamacadda.
Safiirka Turkiga ee Soomaaliya Danjire Olgan Bekar ayaa guddoomiyaha Jaamacadda Ummadda Dr Maxamed Axmed Jimcaale ku wareejiyay 40 Kombiyuutar, waxaana uu balan qaaday in Dowladda Turkiga ay waxayaabaha ay muhiimada siineyso ay ka mid noqon doonto Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed, marwalbana ay dhiiri gelin doonaan Waxbarashada.
Gudoomiyaha Jaamacadda Ummadda Dr Maxamed Axmed Jimcaale ayaa sheegay in kulanka ay la qaateen safiirka uu yahay mid ay kaga wada hadleen sidii ay gacan uga geysan lahaayeen qalabeynta Jaamacadda.
Dhanka kale Ardayda Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ayaa maanta u fariistay Imtixaankii ugu horeeyay ee ay Jaamacaddu qaado muddo 23 sano kaddib.
Jaamacada Ummadda Soomaaliyeed ayaa ahayd halka ay ka soo maaxato aqoonta, waxaana ay safka hore kaga jirtay Jaamacadaha ugu horumarsan Qaaradda Afrika.